नेपालमा संक्रमणकाे कुन चरणमा दौडिरहेको छ कोरोना भाइरस? – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख ८ गते १६:०३
दार्चुलाकाे मार्मा गाउँपालिकामा कोरोनाविरुद्ध सचेतना, सबै वडामा स्वास्थ्यकर्मी
नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा पुगिसकेको छ। उदयपुरमा एकै दिन १२ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। सुदूरपश्चिममा एकै दिन तीनजना नयाँ संक्रमित भेटिए। चितवनमा पनि उस्तैगरी भेटिएका छन्।
भारतबाट आएकाहरूमा बढी संक्रमण देखिनुले पनि नेपालमा फैलिन सक्ने संकेत गरिसकको छ। सर्वप्रथम तेस्रो र चौथौ चरणमा पुग्न नदिनको लागि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
संक्रमित व्यक्तिहरूको परिवार, आफन्त तथा समुदायमा के कति संक्रमति छ कि छैन भनेर खोज्न आवश्यक छ। अहिले हाम्रो अवस्थामा परीक्षणको दायरा नै बढाउने हो।
सुदूरपश्चिमबाट फैलन नदिनको लागि भारतबाट आएका मानिसमा र्‍यापिडमार्फत परीक्षण गर्ने आवश्यक छ। उक्त प्रदेशमा डबल लकडाउन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। भारतबाट आएका व्यक्तिहरूलाई गाउँ-गाउँमा खोजी गरेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। नेपालमा तेस्रो चरणको संक्रमण देखियो भने भयावह अवस्था निश्चित नै छ।
सामान्य अवस्थामा पनि गम्भीर रोगका बिरामी आइसियू र भेन्टिलेटर अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता रहेको हाम्रो देशमा महामारी सामना गर्न तयारी अपूर्ण देखिएको छ।
सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर र बागलुङमा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, सरकारले समयमा नै परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्छ।
सरकारले हालसम्म एकदमै न्यून मात्रामा परीक्षण गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार परीक्षणको दायरालाई बढाउन सकेमात्र महामारीलाई रोक्न सकिन्छ। सरकारले लाखौं संख्यमा परीक्षण नगरेसम्म नेपालमा कोरोनाको स्थिति के छ भन्ने यकिन हुँदैन।
परीक्षण भएपछि पोजेटिभ भएको अवस्थामा मानिसलाई आइसोलेसन तथा आइसियूमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले हालसम्म कोरोनालक्षित आइसियू तथा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको छैन। विकसित देशहरूले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गर्न नसक्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइरहेको छ।
नेपालमा भाइरस समुदायस्तरमा फैलिएको हुनाले र्‍यापिड टेष्ट नै अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो चरण देखियो भने संक्रमण फैलिन बेर लाग्दैन।
पहिलो चरणमा संक्रमण एक व्यक्तिलाई हुन्छ, जुन अन्य देशबाट आएका हुन्छन्। खासगरी पहिलेदेखि सङ्क्रमणको चपेटामा रहेको देशबाट सङ्क्रमित व्यक्ति सङ्क्रमण लिएर आउँछ। बाहिर देशबाट संक्रमण भएर आएको अवस्थालाई पहिलो चरण भनिन्छ।
दोस्रो चरणमा विदेशबाट आएका व्यक्तिले आफन्त वा परिवारलाई सार्ने गर्दछन्। विदेशबाट संक्रमण लिएर आएको व्यक्तिले आफ्नो परिवारमा रोग सार्छ, जुन बेलाबाट दोस्रो चरणको सुरू हुन्छ। नेपाल भर्खरै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो चरणमा सङ्क्रमित व्यक्तिहरुलाई पत्ता लगाउन र क्वारेन्टाइनमा राख्न सजिलो हुन्छ।
तेस्रो चरणमा विदेशबाट आएका परिवार तथा आफन्तको संक्रमणबाट अन्य समुदायस्तरमा सक्रमण फैलिन्छ। यो संक्रमणको आयतन फराकिलो फैलिन्छ। यसलाई सामुदायिक सङ्क्रमणको चरण पनि भनिन्छ।
यसबेला सङ्क्रमणको स्रोत पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ अर्थात् दोस्रो चरणमा जस्तो कुन व्यक्तिबाट कुन व्यक्तिमा सङ्क्रमण भयो भन्ने पत्ता लगाउन सजिलो हुँदैन। यस चरणमा र्‍यापिड टेष्टको जरुरत पर्छ। तेस्रो चरणमा सरुवा रोग प्रवेश गरेपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन थाल्छ।
महामारी रोक्नको लागि सरकारले चालेको लकडाउन कदम एकदमै उचित हो। जनताले यो कुरालाई मनन् गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबल राख्न सकेमात्र यो लडाइँ जित्न सकिन्छ।
यो चरण कोरोनाको संक्रमण सबैभन्दा अन्तिम चरण हो। चौथो चरणमा पुगेपछि रोगले महामारीको रुप नै लिन्छ। यो चरणमा रोगलाई नियन्त्रण गर्ने गाह्रो हुन्छ। यो चरणमा सरुवा रोगको सङ्क्रमण धेरै प्रमुख समूहमा देशैभरि फैलिएको हुन्छ।
सरकारले अहिलेको अवस्थासम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। स्थानीय स्रोत–साधन प्रयोग गरेर भने पनि स्वास्थ्यकर्मीले केही हदसम्म सुरक्षा अपनाएका छन्। तर, यस्ता सामग्रीले भाइरस रोक्न सक्दैनन्।
हामीले स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर पिपिई तयार पारेका छौं। जुन पिपिई कतिको गुणस्तरीय छ भन्ने प्रमाण छैन। कोरोनाका आशंकामा अस्पताल आएका बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीले ठूलो जोखिम मोलेर हेरिरहेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षित हुन सकेनन् भने यो महामारीलाई जित्न असम्भव छ। अहिले नेपालमा ९ जनामा संक्रमण देखिएको छ। तर, यो चरण तेस्रो चरणमा पुग्ने हो भने नेपालले महामारीलाई थेग्न सक्दैन। दोस्रो चरणलाई यथावत् रुपमा राख्न सकियो भने धेरै नै उत्तम हुन्छ।
महामारीको रुपसम्म पुगेका राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मी नै सुरक्षा सामग्रीको अभावमा संक्रमित हुन पुगे भने कतिको मृत्युसमेत भइरहेको छ। त्यसकारण सरकारले यो विषयमा महामारीको रुप लिनुभन्दा पहिल्यै सोच्नु जरुरी छ। स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमण भएको अवस्थामा बिरामी कसले हेर्ने?
विदेशबाट आएका प्रत्येक व्यक्ति कोरोनाको परीक्षणमा नेगेटिभ आए पनि १४ दिन भन्दाबढी क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्छ। उनीहरूमा १४ दिनभित्रमा कोरोना देखिन सक्छ। संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरे पनि महामारी हुन नदिने सरकारले अबलम्बन गरेका उपायहरू सबै जनताले पालना गरे यो माहारीलाई सजिलै जित्न सकिन्छ।
हाम्रो अस्पतालमा पनि ज्वरोका बिरामी आइरहेका छन्। तर, हामीसँग नमूना परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन। कोरोनाका आशंका भएका व्यक्तिलाई नमूना परीक्षणको लागि धरान पठाउने गरेका छौं। सरकारले कोरोना हेर्ने अस्पताल तोकिदिएको छ। त्यसैअनुरुप हामीले अन्य अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेका छौं।
(विराट मेडिकल कलेजका डाक्टर मेहेतासँग हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंसितको कुराकानीमा आधारित)
Tags: काेराेनाभाइरस, डा. रामकुमार मेहता, विराट मेडिकल कलेज